Home » Na-agbasa News Travel » NASA boro China ebubo na ọ dara iwu bara uru mgbe Rocket dasịrị nso Maldives
Ndị mmadụ si New Zealand ruo New York, site na Tokyo ruo Rio nọ n'ọnụ ọnụ taa na-achọ igwe maka ụgbụ a na-achịkwaghị achịkwa, na-enwe olileanya na ọ ga-egbochi ha.
Mgbapu sitere na rọketi buru ibu nke China na-agbada n'uwa n'ụzọ na-achịkwaghị achịkwa ekwuputala na Osimiri Indian dị nso na Maldives n'ụtụtụ a.
Onye nchịkwa NASA, Sen. Bill Nelson wepụtara nkwupụta na Satọdee gbasara mpekere nke China Long March 5 Rocket:
Rọketi ahụ wepụrụ ụbọchị iri gara aga wee bụrụ ihe a na-apụghị ịchịkwa achịkwa
Ọtụtụ ijeri mmadụ n'ụwa hụrụ ka outgbọelu a na-ejichi achịkwa na-akụ ha site na mbara igwe. Mgbe rọketi a dakwasịrị n'Oké Osimiri Indian dị nso na Maldives, na-enweghị igbu onye ọ bụla.
NASA kwuru, sị: “Mba ndị na-erubere mbara ala ga-ebelata ihe ize ndụ dịịrị ndị mmadụ na ihe onwunwe n’elu ụwa site na ntinyeghachi ihe ndị dị n’elu mbara ma bulie nghọta n’ụzọ doro anya banyere ọrụ ndị ahụ.
“O doro anya na China na-emezughị imezu iwu ndị metụtara ọrụ iberibe oghere ha.
“Ọ dị oke mkpa na China na mba ndị na-efe mbara igwe na ụlọ ọrụ azụmahịa na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na n'ụzọ doro anya na mbara igwe iji hụ na nchekwa, nkwụsi ike, nchekwa, na nkwado nke ogologo oge nke ọrụ mbara igwe."